प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ्य भएको समाचार गलत, वास्तविक कुरो के हो ? | suryakhabar.com
Home स्वास्थ्य प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ्य भएको समाचार गलत, वास्तविक कुरो के हो ?
on: २३ बैशाख २०७५, आईतवार १४:०२ In: स्वास्थ्यTags: प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ्य भएको समाचार गलत, वास्तविक कुरो के हो ?No Comments
काठमाडौं । त्रिभूवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा.तीर्थ खनियाँले प्रधानमन्त्री अस्वस्थ भएको बताए लगत्तै केही अनलाईन मिडियामा समाचार आएको छ । प्रधानमन्त्रीको अस्वस्थताको कारण देखाउदैँ त्रिवि सभा स्थगित गरेको विषयमा प्रधानमन्त्रीका सहयोगीले आपत्ति जनाएका हुन् ।
Tags: प्रधानमन्त्री ओली अस्वस्थ्य भएको समाचार गलतवास्तविक कुरो के हो ?
२३ बैशाख २०७५, आईतवार १४:०२